Cover News Archives ⋆ Popular
ဒီကလေးဟာ တအား သနားဖို့ ကောင်းတယ်။ မိဘတွေ အဝေးတစ်နေရာရောက် နေတဲ့ အချိန်မှာ သူ့တစ်ယောက် တည်း ရပ်တည်ရတာလေ။ သူ့ကို ကြည့်ရတာ အထီး ကျန်တယ်လေ။ အနုပညာအလုပ်ကို တော့ သူလုပ်မှာ ပါ. .…
မြန်မာပြည်ထဲက မီဇာတ်ကားကို ရွေးလိုက်တာပါ။ မလေးရှားမှာပြုလုပ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ကျတော့ ပြပွဲရော၊ ပြိုင်ပွဲရောပါ။ ဆုလည်းပေးတယ်။ လန်ဒန်မှာတော့ ဆုမပေးပါဘူး။ ပြပွဲသက် သက်ပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်. . .
သရုပ်​ဆောင်​ပိုင်းတင်​ မကဘဲအသက်​ကြီး လာရင်​လည်း ထုတ်​လုပ်​သူတစ် ယောက်​အနေနဲ့ လုပ်​ရမယ်​ဆိုလည်း လုပ်​ကြည့်​ချင်​တယ်​။ ရေရှည်​ရပ်တည်​ဖို့ဆိုရင်​ ကိုယ့်​စီးပွားရေးနဲ့ပဲ ရပ်​တည်​ရ မယ်​. . .
မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံး သမားလေးအောင်သူနဲ့သရုပ်ဆောင် မင်း သမီးချောလေး ပိုးအိအိခန့်တို့ရဲ့ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားကို မတ် လ ၂၆ ရက် ညပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့၊Western Park Ruby မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၉ လ လောက်ကတည်းက…
လူတစ်ယောက်က ဘယ် လောက်ပဲ တော်နေပါစေ။ ထက်မြက်နေပါစေ။ သူ့မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုရဖို့ လိုပါတယ်။ လုပ် ပိုင်ခွင့် မရှိရင်. . .
နိုင်​ငံခြား မှာက Independent ဖြစ်​တယ်​။ ၁၈ နှစ်​ပြည့်​ပြီ ဆိုရင်​ ကိုယ့်​ပိုက်​ဆံကိုယ်ရှာရတယ်​။ မြန်​မာပြည်က တက္ကသိုလ်​ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေနဲ့ သိပ်​မတူဘူးလို့ထင်တယ်​။ မြန်​မာပြည်​က ကလေး တွေက ပိုပြီးတော့. . .
ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ပွဲကတော့ နီနီတို့အတွက် ပထမဆုံးအကြိမ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ အမြဲတမ်းလည်း လုပ်နေကျဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်လိုမျိုး အိုင်ဒီယာ ဆန်းသစ်အောင်လုပ်ရမလဲ စဉ်းစားရတာပေါ့။ သီချင်းတွေကတော့ အစုံဆိုခဲ့ ပါတယ်။ အဝတ်အစားပိုင်း ဆိုရင်လည်း. . .
သူငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းတက် တုန်းကလည်း သူ့ကို လူကြမ်းကြီးသား ဆိုပြီးစချင်နောက်ချင်တဲ့ ကလေးတွေ၊ စိန် ခေါ်ချင်တဲ့ကလေးတွေ ရှိတယ်။ အဲ့တာကို ကျွန်တော်တို့က ကျောင်းက ဆရာမတွေနဲ့ ဆွေးနွေး အဲဒီကလေးတွေခေါ်ပြီး. . .